Deynta sawirka: Pioneer Press, Ben Garvin
Fadlan la soco: Qoraalkani wuxuu raacayaa a dhawaaqa waxaa qoray madaxweynaha McKnight Kate Wolford iyo gudoomiye kuxigeenka Debby Landesman oo ku saabsan isbedelada deeqaha ee soo socda si aan ugu dhaqaaqno howsheena.
Marka kuwa taariikh ahaan laga soo saaray ay wax fiican qabtaan, qof kasta oo reer Minnesota ah ayaa faa'iido leh. Ganacsiga, bulshada, iyo hogaamiyaasha dawladu way yaqaanaan marka hore, iyo daraasado cilmi baaris ah, in kasbashada sinaanta ay xoojineyso dowladnimada bulshada, dhaqanka, iyo dhaqaalaha. Waxay xoojineysaa shaqaalaheena, waxay hubineysaa in shirkadaha maxalliga ah ay ku tartami karaan dhaqaalaha adduunka, waxayna sare u qaadeysaa tayada nolosha ee dhammaan bulshooyinka.
Angela Glover Blackwell, aasaasaha 'PolicyLink', waxay ku tiri si wanaagsan qormadeeda Seminaarka awooda saamaynta goynta: "Burbur darbiyada ka saarida oo dhis dariiqyo la heli karo oo guusha, qof walbana waa guuleystaa."
Waxaan ka ognahay hogaamiyaasha qaran sida Blackwell, iyo wada-hawlgalayaasha maxalliga ah iyo deeq-bixiyeyaasha, in laga fogaado ciyaar aan eber ahayn, sinnaantu waa runtii, a xoog xoog badan.
Ku dhawaaqista Aagagga Diiradda Cusub ee Sinnaanta
Kordhinta ballanqaadkeenna bulshooyinka ku nool gobolka Minnesota, barnaamijka cusub wuxuu diiradda saari doonaa kor u qaadida dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, horumarinta hormarinta sinaanta, iyo kordhinta ka qeybgalka bulshada.
Dhaqdhaqaaq dhaqaale waxay ku saabsan tahay xiritaanka farqiga u dhexeeya jinsi ee dakhliga, shaqada, waxbarashada, iyo taajirnimada. Iyada oo da'da da'da shaqaalaha iyo jiilka da'da yar ay sii kordhayaan kala jaadjaadnimo ah, waxaan fursad u helnaa inaan kobcinno isir iyo cunsur weyn.
Horumar loo wada dhan yahay waxay quseysaa muraayadaha sinnaanta iyo isirrada midabka iyo istiraatiijiyadda horumarinta bulshada. "Horumar la taaban karo waa istaraatiijiyad horumarineed oo togan oo ka shaqeysa sidii loo hubin lahaa in la xisaabtamo, lagana wada qeyb galo, iyo maalgashiga balaaran ee laga sameeyay bulshooyinka dhaqaalahoodu hooseeyo iyo bulshooyinka midabka leh, iyadoo sidoo kale la hubiyo in jaaliyadani ay qeyb ka yihiin hagida iyo ka faa iideysiga maalgashigan cusub," ku SiyaasaddaLink.
Ka qeyb qaadashada bulshada waxay ka dhigan tahay taageerida kartida bulshada ee lagu aqoonsanayo waxyaabaha mudnaanta leh iyo xallinta hore, aaminsanaanta markii aan ku xidhnay qiimayaasha la wadaago, dhammaanteen waan ka faa'iidaysannaa. Waxaan aaminsanahay ku lug lahaanshuhu inuu u baahan doono habab cusub oo si wada jir ah looga wada shaqeeyo, laguso kabsado aaggaga caanka ah laakiin badanaa lakala jaro, iyo kordhinta awooda bulshooyinka dhaqamada kaladuwan iyo dhamaan dhaqamada kaladuwan ee Minnesota si loo baaro dhibaatooyinka joogtada ah ee qaab dhismeedka kala duwan. Khibradaheena McKnight, gudaha iyo dibaddaba, qaababkani waxay sii xoojinayaan awooddeena inaan diirada saarno, dejino kala hormarinta, iyo hormarinta xalka wanaagsan.
Si fudud, waxaan u aragnaa mustaqbal halka dhammaan reer Minnesota ay ka heli doonaan fursado badan oo ay ku helaan oo ay ku muujiyaan awood; si bulsho ahaan, dhaqan ahaan, iyo dhaqaale ahaanba ugu horumaro; iyo in si buuxda looga qaybqaato nolosha bulshada.
Maxaa Bulsho Loogu Baahan Yahay
Guud ahaan gobolkayaga, waa inaan la kulannaa kala-duwanaansho xagga isirka iyo dhaqaalaha ah iyo caqabadaha nidaamyada iskuxiran ee sababay. In kasta oo aan ku arki karnaa iftiinka rajo iyo horumar dadaallada qiimaha badan ee mudan in lagu kashifo sinnaan darrooyinkaas, waxaan sidoo kale is-hoosaysiin u qiraynaa niyad jabkeena xawaaraha iyo heerka isbedelka.
Xuquuqda sinaanta ka sokow, Nidaamkeena Istaraatiijiyadeed wuxuu si ula kac ah ugu yeerayaa diirada saarida sinnaanta isirka. Qaabka 'isirka iyo' waa mid cad oo lagamamaarmaan u yahay qirashada waxyaabaha isdhaafka ah ee u horseedda kala-duwanaanshaha.
Ballan qaadkan wuxuu aqoonsan yahay xaqiiqada ah in Minnesota, in xarumaheena iyo nidaamyadeena ay aad ugu dhacaan bulshadaheena. Haddii aan khariidaynayno sida dadka ka kala socda jinsiyadaha kaladuwan ay ugu yaalliin fursadaha, waxaan arki karnaa farqi u dhexeeya helitaanka kheyraadka, fursadda, iyo raad-reebista.
Iyada oo la xoojinayo bulshooyinka loo wada dhan yahay oo loo wada siman yahay waxay noo baahan tahay inaan aqoonsanno dariiqooyinka midab-kala-sooca aan ku guuleysanay inaan wax ka qabanno kala-duwanaanshaha xaaladaha siyaasadeed, bulsho, iyo dhaqaale. Sida john a. budada ah Machadka Haas ee loogu talagalay Bulsho Cadaalad ah oo loo dhan yahay tilmaanta, sida aan ugu fikirno caddaaladdu waa inay tixgelisaa "duruufta ku xirnaanta" ee kooxaha kaladuwan - sida ay ugu egyihiin xaaladaha qaraabada iyo natiijooyinka. Gaaritaanka sinaanta waxay u baahan tahay tixgalinta duruufaha saamaynaya qeybaha kala duwan ee bulshada marka aan hirgalinno xalka.
Si kor loogu qaado tayada nolosha ee gobolka oo dhan, istiraatiijiyadeenu waa inay labaduba ahaadaan caalami ah iyo la bartilmaameedsaday. Waa inaan u qaabeeysanaa si aan u hagaajino natiijooyinka dhammaan iyadoo annagoo si taxaddar leh u wajahayna natiijooyinka aan isle'egayn ee ay soo mareen bulshooyin badan. Waa inaan si isku mid ah u ixtiraamnaa wadajirka aadamiga iyo wada-noolaanshahayada badan ee khibradaha aadanaha.
Maxaa Soo Kordhay
Markii aan horumarinay istiraatiijiyadeena, waxaan rajeyneynaa inaan maqalno fikradahaaga iyo fursadaha aad aragto si aan u sii gaarno himilooyinkaan. Waxaan ku martiqaadeynaa deeq bixiyaasha iyo xubnaha bulshada inay jawaab ka bixiyaan khadka tooska ah iyo shaqsi ahaan. Raadi ogeysiiskaas bisha Oktoobar. (Cusboonaysiin: su’aalaheenna internetka ayaa la xirayaa Noofambar 27, 2019. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan safarka waxbarashada iyo sida aan u casuumeyno fikradaha bulshada halkan.)
Intaas waxaa sii dheer, waxaan si dhow ula shaqeyn doonnaa asxaabteena guud ahaan aasaaska, gaar ahaan ballaarinta Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest barnaamijka, si loo hubiyo in aan isku waafajinno sidii aan ugu shaqeyn lahayn mustaqbal aad u caddaalad badan dhammaan dadka iyo meeraha. Farshaxanno fara badan iyo ururo farshaxan oo aan taageerno ayaa durba safka hore kaga jira dhismaha Minnesota loo siman yahay, waxaanan sii wadi doonnaa inaan wax ka baranno oo aan dhexgalno fikradahaas. Caqabadaha isku dhafan waxay u baahan yihiin fikir isku dhafan iyo furfurnaan badan, waxaanan aragnaa isgaarsiinno badan oo dabiici ah oo lagu hormarinayo dhammaan himilooyinka barnaamijka.
Markii aan bilaabeynay dhisidda barnaamijkan cusub, ma jiri doonno wareegyo codsi bilow ah oo mustaqbal ah midkoodna Gobolka & Bulshada ama barnaamijka waxbarashada. Codsiyada deeqda lagu casuumay ee horeyba howsha u qabtay waxaa dib loogu eegi doonaa sida ku xusan tilmaamaha hadda jira, iyadoo go'aanada la gaarayo dhamaadka 2019. Deeqaha hore loo ogolaaday wax saameyn ah kuma yeelan doonaan; waxay ku dhamaan doonaan dhamaadka shuruudahooda. Waxaan rajeyneynaa inaan ku dhawaaqno tilmaamaha barnaamijka cusub ee barnaamijkaan cusub deyrta 2020, waqtigaas oo deeq bixiyeyaasha ku habboon shuruudaha laga codsan karo maalgalin cusub.
Minnesota ayaa si gaar ah loogu diyaariyey inay noqoto waddan u shaqeeya dhammaan deganeyaasheeda — isir, dhaqan, qowmiyad, midab, dakhli, juqraafi, iyo kala duwanaansho kale. Samaynta horumar dhab ah waxay qaadan doontaa shaqo adag. Dhisidda xiriirkeenna qoto dheer ee aan la leenahay bulshada iyo tanyada Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo ka go'naashaha Kaqeybgalka, McKnight wuxuu rajeynayaa inuu kaalinteenna ka cayaaro mustaqbalkeena.
Waxaan rajeynayaa inaad la wadaagi doonan yididiiladayada ku saabsan ballamaha shaqadeenna cusub ee bulshada waxaanad nagala soo qayb geli doontaan dhismaha mustaqbal xamaasad leh oo loogu talagalay dhammaan reer Minnesota.
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, Waxbarasho, Gobolka & Bulshada, Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah
Qoraalkeena Cimilada Cusub iyo Hadafka Beesha
Video Sebtember 2019